Vibenomics: Mozika sy hafatra miorina amin'ny toerana misy anao manokana. Martech Zone
Vibenomics: Mozika sy fandefasana hafatra miorina amin'ny toerana misy anao
Asabotsy 24 Febroary 2018 Alatsinainy 26 Febroary 2018 Douglas Karr
Ny praiminisitra praiminisitra Car Wash Brent Oakley dia nanana olana. Voadona ny fanasan-dohany tamin'ny fiarany, saingy raha niandry tamin'ny fiarany ireo mpanjifany dia tsy nisy nanantona azy ireo tamin'ny vokatra sy serivisy vaovao natolotr'izy ireo. Namorona sehatra ahafahany mandrakitra hafatra sy mozika miorina amin'ny toerana sy mozika ho an'ny mpanjifany izy.
Rehefa nanomboka nampiroborobo ny fanoloana fanasan-damba tamin'ny alàlan'ny onjam-peo in-store izy dia namidy solo-drao betsaka kokoa tao anatin'ny iray volana noho izay namidiny tao anatin'ny dimy taona lasa. Fantatr'i Brent fa tsy nanana vahaolana ho an'ny mpanjifany fotsiny izy, nanana sehatra nilain'ny indostria izy. Niala tamin'ny orinasan-fanasana fiara àry izy ary nanomboka Vibenomics.
Vibenomics dia sehatra haino aman-jery an-tserasera manome playlists mozika namboarina sy hafatra tsy voafetra, voarakitra arak'asa. Topazo maso ny fomba mahatonga ny rindrambaiko Vibenomics manavao hamorona vibe tsy manam-paharoa izay mitondra ny toekarena ara-barotra mora sy mahomby.
Matetika ny fivarotana antsinjarany dia mandoa ny vahaolana mozika manana fahazoan-dàlana, fa ny Vibenmoics dia manolotra vahaolana mozika sy fandefasan-kafatra izay miverina amin'ny fampiasam-bola.
Vibenomics dia manome fidirana amin'ny orinasa amin'ny tranomboky mozika manana fahazoan-dàlana feno ary mora ampiasaina ny app izay ahafahan'izy ireo mandefa sy mahazo fanambarana manokana sy voarakitra arak'asa amin'ny andro nangatahanao azy ireo. Tsy mila miahiahy momba ny fantsom-pifandraisana na olana ara-teknika akory ireo orinasa - mihazakazaka amin'ny tablette Powered ilay sehatra. Ampidiro fotsiny, dia afaka mandeha ianao!
Tsy ny orinasa ihany no afaka mamoaka ny hafatra alefany, fa afaka manokatra ny tambajotrany ho an'ny mpanao dokambarotra ankolafy fahatelo! Zahao ny azy ireo vahaolana raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny hoe afaka manampy ny indostriao izy ireo.
Tags: hafatraMusictambajotram-peofeo antsinjaranyvibenomics